Labo bambaano oo lagu weeraray xeebta Kenya - Sabahionline.com
Labo bambaano oo lagu weeraray xeebta Kenya Abriil 01, 2012
Ugu yaraan hal qof ayaa dhintay 18-na way ku dhaawacmeen laba weerara loo lala beegsaday isu soo bax kaniisadeed oo ka jirey Mtwapa iyo makhaayad ku taalla Mombaasa Sabtidii (31-ka March) sida ay weriyeen Laanqaydha Cas ee Kenya iyo saraakiisha bilayska. Qodobbo la xiriira
Bilayska Kenya oo dilay saddex looga shakiyay dagaalyahannada Golaha Jammhuuriga Mombasa
Bilayska ayaa sheegay in aalad qaraxda oo ay u badan tahay in ay bambaanada gacanta tahay lagu tuuray dad ku shirsanaa Mtwapa abbaaraha 8-dii fiidnimo. “Lix iyo toban qof ayaa dhaawacantay oo labo ka mid ihi ay yihiin dhaawac halis ah, midna waa uu dhintay,” ayuu Nelly Muluka, oo ah haweeney u hadashay Laanqaydha Cas ee Kenya AFP-da u sheegtay, iyadoo ku dartay in dadkii dhaawacmay ay cisbitaalka yaallaan. Taliyaha bilayska ee gobolka xeebta, Aggrey Adoli ayaa AFP-da u sheegay in “garnayl kale lagu soo tuuray makhaayad ku taalla Mombaasa” daqiiqado ka dib, taas oo dhaawacday saddex qof oo uu midkood yahay sarkaal bilays ah. Mid ka mid dhibbanayaashaa ayaa weli ku jira cisbitaalka, ayuu yiri Muluka. Dadka deegaanka ah ayaa sheegay in ay makhaayaddu caan ku ahayd in lagu gado hilibka doofaarka. Ma jirto cid markiiba sheegatay masuuliyadda weerarradii Sabtida, maamulkuna weli kama aanu faalloon cidda laga yaabo in ay ka dambayn karto. Muxuu kula yahay qoraalkan?
Xitaa kaniisada dadka waa labaaraa si looga fogaado dhaawac.
Dhalinyarooy midaas waxay tusinaysaa in ciidankeena Kenya aysan sifiican wax u qabanaynin hadii kale waa in ay cashar ka qaataan qarixii hore ee kadhacay Gaarisa iyo Nayroobi QOFKA ISKU GOD LABA JEER LAGAMA QANIINO. Mohammed Noor degmada Isiolo